Description/subject: Key Findings: 1. The construction of the Thailand- financed segment of the Asian Highway between Thin Gan Nyi Naung and Kawkareik violated the right to Free, Prior, and Informed Consent (FPIC) of local communities, who have been negatively impacted by the road project. • Contrary to the principle of FPIC, affected villagers were not properly informed or consulted prior to the commencement of development activities, only learning about the project once construction had begun. • At least 17 households were forcibly dispossessed of their land and property due to an order issued by the Karen state government, which failed to provide adequate compensation to displaced villagers. • There is no publicly accessible evidence of project proponents conducting either an initial environmental examination (IEE) or environmental impact assessment (EIA) in advance of implementation. • Villagers were not compensated for environmental damage to their farmlands asaresult of the project. • Rice production along the affected section of the highway has been reduced due to excessive water on one side of the road and insufficient water on the other side asaresult of improper installation of drainage pipes. • Project affected persons were coerced into accepting inadequate compensation for their losses. • The Ministry of Construction did not consult or negotiate with project affected persons on compensation, as amounts were pre-determined and not subject to reconsideration. • No grievance redress mechanism was established to facilitate mitigation of negative impacts to project affected persons and ensure that their rights are protected. • There is no resettlement plan for those who were displaced from their land due to the project. • There is no system in place to provide replacement land for farmers whose livelihoods have been disrupted due to road construction. • There have been no consultation or arrangements to relocate project affected persons whose homes were destroyed by the project...... 2. The ADB and Burma/Myanmar Ministry of Construction (MoC) appear poised to repeat these mistakes in relation toaplanned upgrade ofastretch of the AH1 between Kawkareik and Eindu, despite assurances otherwise. • Villagers have not been properly informed or consulted about the project, with consultations taking place from December 2nd to December 5th, 2015 in only six out of 16 total affected villages. In these meetings, ADB indicated that compensation would be provided as money in envelopes and given to the affected villagers, but at the time, did not specify who would distribute it. • ADB also indicated that it would not deal directly with compensation and resettlement • From June 17th to June 19th, 2015, inadequate consultations took place in three villages – Lonenyaw, Nga Taing, and Wei Kayin. • The number of people who will lose their land due toagovernment-demarcated right of way is unknown since ADB excluded the right of way from its resettlement plan. • Without proper oversight, the ADB has entrusted the MoC to carry out sensitive resettlement and compensation activities in accordance with its Safeguard Policies. • Compensation procedures have not been disclosed to project affected persons despiteanumber of plans and strategies issued by ADB in relation to the project since 2015...... 3. Withafull peace agreement still pending, road construction projects have increased tensions between different actors competing for control of the highway area. If the project continues before political agreements to createadecentralized federal union are finalized, andabenefit-sharing scheme for the Asian Highway in Karen State is not established, the potential for armed confl ict to break out will continue to exist. • NEDA, ADB and MoC have not adequately considered or addressed the risks to the wider peace process when pushing through the Asian Highway project. • Past and continue skirmishes between the DKBA and the BGF/Myanmar Army over control of the AH1 has endangered villagers, forcing them to flee their villages and disrupting their livelihoods. To date, some still have not been able to return. • Recent outbreaks of violence and ongoing risk of new clashes continues to drive villagers away and prevent them from returning home.
Title: Beautiful Words, Ugly Actions - The Asian Highway in Karen State - ‘ ’ လ ပသောစ ကား လးမားနင လ ပသောစကားလးများန င အ က ညးတ န ရ ပ ဆးေ သာလ ပ �
Description/subject: ။ ထ ငးန င င ကငွေကြေးထောက ပ ၍ သင်္ကနးည နောငနင ကော ကရ တ အကြားဖောက လ ပ ထားသည အာရ အဝေးပြေးလမးမသစ သည ယခ အခါနောက ဆက တွဲအကျုးဆက များ က ခ စားနေရသည ဒေသခ လ မ အသ ငးအ၀ ငး၏ FPIC ခေါ် အချ န မ ကြုတင သတငးအ ချက အလက ရရ ကာ လွတ လပ စွာသဘောထားပေးပ င ခွင က သ သ သာသာချုးဖောက ခဲ သည ။  အကျုးအဆက ခ စားရသည ရွာသ ရွာသားများသည စ မ က နးန င ပတ သက ၍ အသ ပေးခြငးသ့ မ ဟ တ ဆွေးနွေးတ င ပင ခြငးက မည သည အခါမ မရရ ခဲ ပဲ လမးဖောက လ ပ ရေးလ ပ ငနးစတင သည အခါမ ပင စ မ က နးအကြောငးက သ ခဲ ရသည ။  အနညးဆးအ မ ထောင စ ( ၁၇ ) စ သည ကရင ပြည နယ အစးရက ထ တ ပြန သော အမ န့ ကြောင ထ က တန သည လျော ကြေးများမရရ ပဲ ၎င်းတ့ ၏မြေယာများန င ပ င ဆ င မ များက မ မ ဆန မပါဘဲ အတငးအဓမ စွန့ လ တ ခဲ ရသည ။  စ မ က နးအတွက ကနဥးသဘာဝပတ ၀နးကျင ဆ င ရာစးစမးလေ လာမ (IEE)နင ပတ သက ၍သော လညးကောငး၊ သဘာဝပတ ၀နးကျင အပေါ် အကျုးသက ရောက မ ဆနးစစ အကဲဖြတ ချက (EIA)နင ပတ သက ၍သော လညးကောငး၊ လ ပ ဆောင ထားသည ဟ သော သက သေအချက အလက များက လ သ ရ င ကြား ထ တ ဖေါ်ချပြ ထားခြငးမရ ခဲ ချေ။  စ မ က နး၏အကျုးဆက အဖြစ ဖြစ ပွားသောသဘာဝပတ ဝနးကျင ဆ င ရာထ ခ က မ မ တစ ဆင ရွာသ ရွာသားများ၏ စ က ပျုးမြေများပျက စးရသော လညးလျော ကြေးပေး ဆောင ခြငးများ မရ ခဲ ချေ။  ရေဆငးပ က လ ငးတပ ဆင မ စနစ အားနညးခြငးကြောင တစ ဖက တွင ရေအလွန များ နေပြးကျန တစ ဖက တွင ရေအလ အလောက မရခြငးကြောင လမးဖောက လ ပ ရာ လမးန ဘေးတစ ဖက တစ ချက ရ လယ မြေများတွင စပါးထွကနနးကျဆငးလာခဲ သည ။  စ မ က နးအကျုးဆက ခ စားရသ များသည ၎င်းတ့ ၏နစ နာဆးရးမ များအတွက မျတ မ မရ သော လျော ကြေးငွေက လက ခ ရန အတငးအဓမ ဖ အားပေးခြငးခ ရသည ။  လျော ကြေးငွေမည သည ပမာဏလက ခ ရရ မည ဆ သညနင ပတ သက ၍ရွာသ ရွာသားများနင ဆွေးနွေးတ င ပင ခြငးသော လညးကောငး၊ အကြ ဥာဏ ရယ ခြငးသော လညးကောငး၊ မရ ခဲ ပါ။ လျော ကြေးငွေပမာဏက ဆောက လ ပ ရေးဝန ကြးဋ္ဌာနက ကြုတင သတ မ တ ထားပြးဖြစ သည ။ I I II အ ဓ က က သ ညတွေ့ ရ ခ က မား5လ ပသောစကားလးများန င အကျညးတန ရ ပ ဆးသောလ ပ ရပ များ အာရ အဝေးပြေးလမးမကြး၊ ကရင ပြည နယ ၊ မြန မာန င င လ ပသောစကားလးများန င အကျညးတန ရ ပ ဆးသောလ ပ ရပ များ အာရ အဝေးပြေးလမးမကြး၊ ကရင ပြည နယ ၊ မြန မာန င င6 ထ ခ က မ က လျော ပါးစေရနနင စ မ က နး၏ဆးကျုးသက ရောက မ က ရင ဆ င ခ စားရသ များ ၏အခွင အရေးများက ကာကွယ ပေးန င ရန အတွက လ ထ မကျေနပ ချကနင တင ပြချက များက လက ခ ဖြေရ ငးသည လ ပ ထးလ ပ နညးစနစ များ ဖွဲ့စညးထားပေးခြငးမရ ။  မြေယာဆးရးသ များအတွက ပြန လည နေရာချထားသည အစ အစဥ လညးမရ ပါ။  စ မ က နးကြောင မြေယာဆးရးကာ အသက မွေးဝမးကြောငးလ ပ ငနးထ ခ က ပျက စးရသော မြေယာက သာအဓ ကမ ခ အားထားနေရသည လယ သမားများအတွက ၊ မြေ ယာအစားထးပြန ပေးသည စ စဥ မ များမရ ပါ။  လမးစ မ က နးကြောင နေအ မ ပျက ဆးဆးရးလ က ရသည လ ထနင တွေ့ဆ ညနငးတ င ပင ခြငးသ့ မဟ တ ၎င်းတ့ အတွက ပြန လည အခြေချသည အစ အစဥ များပြု လ ပ ပေးခြငးမရ ပါ။ ၂။ ကော ကရ တ - အနုအကြားအဝေးပြေးလမးမက တးချဲ့အဆင မြ င သွားမည စ မ က နးတွင အာရ ဖွ့ ဖြုးရေးဘဏ (ADB)နင မြန မာ ဆောက လ ပ ရေးဝန ကြးဋ္ဌာနသည အလား တ အမားများက ထပ မ ကျူးလွန မည အခြေအနေတွင ရ သည ။  စ မ က နးန င ပတ သက ၍ ရွာသ ရွာသားများက ကျုးကြောငးဆ လျော စွာ အသ ပေးခြငးသ့ မဟ တ ညနငးတ င ပင ဆွေးနွေးခြငးမရ ခဲ ပါ။ ဒ ဇင ဘာလ ( ၂ ) ရက မ ( ၅ ) ရက နေ့အတွငးဆောင ရွက ခဲ သောညနငးအစညးအဝေးသည စ မ က နး၏အကျုးသက ရောက မ ခ စားရသည ရွာ စ စ ပေါငး( ၁၆ ) ရွာများအနက ကျေးရွာ ( ၆ ) ရွာန င သာ ပြုလ ပ ခဲ ခြငးဖြစ သည ။ အဆ ပါအစညးအဝေးတွင အာရ ဖွ့  ဖြုးရေးဘဏ (ADB) က စ မ က နးကြောင ထ ခ က နစ နာမည ရွာသ ရွာသားများအနေဖြင ( စာအ တ တွင ထည ထားသော ) လျော ကြေးက ရရ မည ဖြစ ဟ ပြောခဲ သော လညးအဆ ပါလျော ကြေးက မည သ ကတာဝန ယ ပေးသွားမည က မ တ တ ကျကျရ ငးလငးပြောကြားခြငးမရ ခဲ ပါ။  လျော ကြေးန င ပြန လည နေရာချထားရေးန င ပတ သက ပြးအာရ ဖွ့ ဖြုးရေးဘဏ က တ က ရ က က င တွယ ဆောင ရွက သွားမည မဟ တ ဟ ၎င်း၏က ယ စားလ ယ တစ ဥးက ဆ သည ။  ၂၀၁၅ ခနစ ဇ လ င လ ၁၇၊ ၁၈၊နင ၁၉ ရက များတွင လ နနးရော ၊ ငတ န ၊ ဝဲကရင ကျေး ရွာသးရွာ၌သာ လ ထနင ဆွေးနွေးတ င ပင ညနငးမ များက ပြုလ ပ ခဲ သည ။ ဤသည မာလ လောက သော လ ထ တွေ့ဆ ညနငးမ ပြုလ ပ ခြငးမဟ တ ပါ။  အစးရ၏ လမးနယ န မ တ အသစ သတ မ တ ချက အောက တွင မြေယာဆးရးမည ပြည သ အရေအတွက မည မျရ မည က ရ ငးရ ငးလငးလငးမသ ရပါ။ ADB ၏ ပြန လည နေရာချထားရေးအစ အစဥ သည လမးတးမြင ဆောက လ ပ မ အတွက သာဖြစ ပြးလမးနယ တးချဲ့မ အတွက မပါရ ပါ။7လ ပသောစကားလးများန င အကျညးတန ရ ပ ဆးသောလ ပ ရပ များ အာရ အဝေးပြေးလမးမကြး၊ ကရင ပြည နယ ၊ မြန မာန င င  အာရ ဖွ့ ဖြုးရေးဘဏ (ADB) သည ပြန လည နေရာချထားရေးန င လျော ကြေးငွေ ပေးအပ ခြငးလ ပ ငနးစဥ ကဲ သ့ သော အလွန အရေးကြးပြးအမားခ ၍မရသည လ ပ ငနးများက မြန မာ ဆောက လ ပ ရေးဝန ကြးဋ္ဌာနလက ထဲသ့  ယ ယ ကြည ကြည အပနထားသည ။  ၂၀၁၅ မ စတင ကာ အာရ ဖွ့ ဖြုးရေးဘဏ (ADB) သည စ မ က နးန င ပတ သက ပြးအစ စဥနင နညးဗျူဟာများရေးဆွဲချမ တ ခဲ သော လညးလျော ကြေးပေးဆောင မ လ ပ ငနးစဥနင ပတ သက ပြးစ မ က နးကြောင ထ ခ က မည လ ထ အား ရ ငးလငးတ ကျစွာ ချပြပေးခြငးမရ ။ ၃။ ငြ မးချမးရေးသဘောတ ည ချက များက ပြည ပြည ဝဝမရရ ခင အချ န တွင စ မ က နးက အ ကောင အထည ဖေါ်ခြငးကြောင အကျုးအဆက အဖြစ အာရ အဝေးပြေးလမးမအပေါ် ထ နးချုပ ပ င ခွင ရရ ရေးန င စပ လျဥး၍ လက နက က င အစ အဖွဲ့များအကြား တငးမာ မ များမြင တက စေခဲ သည ။ အကယ ၍ ကရင ပြည နယ အတွငးရ အာရ အဝေးပြေးလမးမ ရရ မည အကျုးအမြတ များက တရားမျတစွာခွဲဝေခ စားခွင ရ စေမည ဗဟ ချုပ က င မ က လျော ချသောဖယ ဒရယ ပြည ထောင စ စနစ က မွေးဖွားပေးန င သညနင င ရေးဆ င ရာသ ဘောတ ည ချက များမရရ သေးခင စ မ က နးက ဆက လ ပ လ ပ ဆောင မည ဆ ပါက ပဠ ပက များဆက လက ဖြစ ပေါ်ဖွယ ရာ ရ သည ။  အာရ ဖွ့ ဖြုးရေးဘဏ (ADB)နင မြန မာဆောက လ ပ ရေးဝန ကြးဌာနတ့ သည အာရ အဝေးပြေး လမးမစ မ က နးက လျင မြန စွာအကောင အထည ဖေါ်န င အောင တွနးပ့  လ ပ ဆောင ရာတွင ငြ မးချမးရေးတည ဆောက မ အပေါ်ကျရောကနင သည စးရ မ ဖွယ ရာများန င ပတ သက ပြးလ လောက သောစဥးစားသးသပ ချင ချ န ပေးခြငးမရ ပါ၊ သ့ မဟ တ အဆ ပါစးရ မ ဖွယ ရာများက က င တွယ ဖြေရ ငးခြငးမရ ပါ။  အာရ အဝေးပြေးလမးမကြးအပေါ် ထ နးချုပ ပ င ခွငနင စပ လျငးပြးတစ ဖက ၌ ဒ ကေဘ အေ (DKBA)နင အခြားတစ ဖက တွင နယ ခြားစောင တပ (BGF)နင တပ မတော တ့ ပေါငးစညးထားသောအဖွဲ့တ့ အကြား ဖြစ ပွားသောယခင တ က ပွဲ များကြောင ရွာသ ရွာသားများသည ဘေးအန ရာယနင ကြုခဲ ရပြး၊ ၎င်းတ့ ၏ ကျေးရွာ များက မ မ ဆန မပါဘဲ အတငးအဓမ စွန့ ခွာထွက ပြေးနေရသည ။ အချု့သောရွာသ ရွာသားများမာယနေ့အချ န အထ မ လကျေးရွာသ့ မပြနနင သေးဘဲဖြစ ကာ ၎င်းတ့  ၏အသက မွေးဝမးကျောငးလ ပ ငနးများလညးထ ခ က ပျက ပြားရသည ။  ယခင တ က ပွဲများန င တ က ပွဲထပ မ ဖြစ ပွားန င သည စးရ မ စရာအခြေအနေများကြောင ရွာသ ရွာ သားများသည နေရပနင ဝေးရာသ့ စွန့ ခွာသွားနေရပြးနေရပ သ့ ပြန လည သွားရေးအတွက လညးအဟန အတားဖြစ နေသည ။
Title: The Asia Highway: Planned Eindu to Kawkareik Town road construction threatens villagers’ livelihoods
Description/subject: "This News Bulletin describes the proposed construction ofaportion of the Asia Highway from Eindu to Kawkareik Town, crossing 17 different villages and one town in Hpa-an, Kyonedoe and Kawkareik townships in Dooplaya and Hpa-an districts. The Burma/Myanmar government has demarcated the route and plans to construct the road with funding from the Asian Development Bank (ADB). The planning of the project has thus far been carried out with little consultation with local communities, who remain suspicious of such projects. If implemented, the highway construction would result in the confiscation of villagers’ land, posingathreat to their basic livelihoods."